ကြှနျမက အိမျမှာ အလတျမ – Shinyoon
ကြှနျမက အိမျမှာ အလတျမ
October 21, 2020 by Shinyoon
အလတျ . . . .
မိသားစုတဈခုမှာ အလတျ ဆိုတဲ့လူတှေ နာမညျအတိုငျးပါပဲ မတ်ေတာတှေ လဈလပျခွငျးတှေ ခံခဲ့ကွတယျ ။
အကွီးအပျေါ အလိုကျသိရပွီး အငယျအပျေါ အလိုလိုကျရတဲ့ လူတှလေေ ။
အလတျ သာမနျသားသမီးတှထေကျ ပိုပွီးလညျး သိတတျကွသလို ပိုပွီးလဲ နားလညျတတျကွတယျ ဒါပမေယျ့ တခွားသူတှလေိုတော့ သဲသဲလှုပျ အခဈြမခံရဘူးပေါ့ ။
အကွီးကို သိတတျရတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ နဲ့ အငယျကို အလိုလိုကျရတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးတှေ နဲ့ ကိုယျဆန်ဒတှေ ရှိလာတဲ့အခါတောငျ နှဈဦးနှဈဖကျကို မြှပွီးကွညျ့ရတဲ့ လူမြိုးလေ ။
ဦးစားပေးခံ လူတနျးစားထဲမှာ မပါတတျဘူးပေါ့ ။ သညျးသညျးလှုပျ အခဈြခံရတဲ့ ကံလဲ မပါဘူးလေ ။
လဈလပျနတေဲ့ နရောတိုငျးကို လိုကျပွီး ဖွညျ့ပေးနတေတျတဲ့ jokerတဈကောငျနဲ့ ဆငျတူတယျ အကွီးတဈယောကျရဲ့အနောကျမှာ ပွီးတော့ အငယျတဈယောကျရဲ့အရှမှေ့ာ ဘာပဲလိုလို အမွဲ သူ့ခေါငျးပျေါမှာခညျြးပဲလေ ။ သညျးခံခွငျးတှေ မွိုသိပျခွငျးတှေ ဖကျပွီး မှေးလာတဲ့ကလေးလို့ လူတျောတျောမြားမြားက ထငျကွလိမျ့မယျ တကယျတော့ အဲ့ဒီ သညျးခံခွငျးတှေ မွိုသိပျခွငျးတှကေ တဖွေးဖွေး ကငျြ့သားရလာခဲ့ပွီး အကငျြ့လိုဖွဈသှားတတျတာမြိုးပါ ။
မိသားစုတဈခုမှာ . . . .တဈမိပေါကျ တဈယောကျထှနျးတာတော့ ဘယျမိသားစုမှာမဆို ပါလာပွီးသားပါ မြားသောအားဖွငျ့ အလတျတှေ မြားတယျ ။ ဆိုးတဲ့အခါ သူ့အပွငျ နှဈယောကျမရှိသလို ကောငျးတဲ့အခါလဲ သူ့ကို မှီတာ မရှိဘူး ။ အလိုလိုကျခံရတာ အခဈြခံရတာတှေ သိပျအမြားကွီး မရတဲ့ကလေးက ကို ကိုးတတျလာတယျ ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဂရုစိုကျတတျလာတယျ မကောငျးတဲ့အကငျြ့အဖွဈကတော့ အရှဲ့တိုကျတတျလာတယျ ။
အလတျ . . . မိသားစုတဈခုမှာ တဈယောကျတညျးဖြောကျပွီး ကှကျပွီး ဆိုးနတောလဲ အလတျတှေ အမြားဆုံးပဲ ။ မိသားစုတဈခုမှာ နောကျဆုံးတဈယောကျတညျးကနျြပွီး မိသားစုအပျေါ တာဝနျကတြေတျတာလဲ အလတျတှေ အမြားဆုံးပဲ ။ ဆိုးခွငျးကောငျးခွငျးတှထေကျ အဓိက က ခံစားခကျြကို နားလညျပေးဖို့ပဲ လိုအပျပါတယျ ။
အကွီးလောကျလဲ အခဈြမခံခဲ့ရသလို အငယျလောကျလညျး အလိုလိုကျခွငျး မခံခဲ့ရတဲ့ အလတျဆိုတဲ့ နရောမှာ လှယျလှယျလေးရငျ့ကကျြလာကွတဲ့ ကလေးတှပေဲ မြားပါတယျ လောကကွီးကို ကောငျးပွဖို့ ဝနျမလေးသလို အရှဲ့တိုကျပဈဖို့လဲ ဝနျမလေးတတျကွဘူး ။ တဈဖကျမှာ အရာရာကို သညျးခံပွီး ကိုယျ့ ဆန်ဒတှကေို မွိုသိပျပဈဖို့လဲ ဝနျမလေးတတျကွဘူး ။ ဆိုးခွငျး ကောငျးခွငျးတှေ နဲ့ ဒှနျတှဲနသေလို မိသားစုတဈခုရဲ့ ကှကျလပျတှတေိုငျးမှာ အလတျတှေ ဖွညျ့တာပဲ မြားပါတယျ ။
အလတ် . . . .
မိသားစုတစ်ခုမှာ အလတ် ဆိုတဲ့လူတွေ နာမည်အတိုင်းပါပဲ မေတ္တာတွေ လစ်လပ်ခြင်းတွေ ခံခဲ့ကြတယ် ။
အကြီးအပေါ် အလိုက်သိရပြီး အငယ်အပေါ် အလိုလိုက်ရတဲ့ လူတွေလေ ။
အလတ် သာမန်သားသမီးတွေထက် ပိုပြီးလည်း သိတတ်ကြသလို ပိုပြီးလဲ နားလည်တတ်ကြတယ် ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေလိုတော့ သဲသဲလှုပ် အချစ်မခံရဘူးပေါ့ ။
အကြီးကို သိတတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ အငယ်ကို အလိုလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ကိုယ်ဆန္ဒတွေ ရှိလာတဲ့အခါတောင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကို မျှပြီးကြည့်ရတဲ့ လူမျိုးလေ ။
ဦးစားပေးခံ လူတန်းစားထဲမှာ မပါတတ်ဘူးပေါ့ ။ သည်းသည်းလှုပ် အချစ်ခံရတဲ့ ကံလဲ မပါဘူးလေ ။
လစ်လပ်နေတဲ့ နေရာတိုင်းကို လိုက်ပြီး ဖြည့်ပေးနေတတ်တဲ့ jokerတစ်ကောင်နဲ့ ဆင်တူတယ် အကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အနောက်မှာ ပြီးတော့ အငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အရှေ့မှာ ဘာပဲလိုလို အမြဲ သူ့ခေါင်းပေါ်မှာချည်းပဲလေ ။ သည်းခံခြင်းတွေ မြိုသိပ်ခြင်းတွေ ဖက်ပြီး မွေးလာတဲ့ကလေးလို့ လူတော်တော်များများက ထင်ကြလိမ့်မယ် တကယ်တော့ အဲ့ဒီ သည်းခံခြင်းတွေ မြိုသိပ်ခြင်းတွေက တဖြေးဖြေး ကျင့်သားရလာခဲ့ပြီး အကျင့်လိုဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးပါ ။
မိသားစုတစ်ခုမှာ . . . .တစ်မိပေါက် တစ်ယောက်ထွန်းတာတော့ ဘယ်မိသားစုမှာမဆို ပါလာပြီးသားပါ များသောအားဖြင့် အလတ်တွေ များတယ် ။ ဆိုးတဲ့အခါ သူ့အပြင် နှစ်ယောက်မရှိသလို ကောင်းတဲ့အခါလဲ သူ့ကို မှီတာ မရှိဘူး ။ အလိုလိုက်ခံရတာ အချစ်ခံရတာတွေ သိပ်အများကြီး မရတဲ့ကလေးက ကို ကိုးတတ်လာတယ် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်တတ်လာတယ် မကောင်းတဲ့အကျင့်အဖြစ်ကတော့ အရွဲ့တိုက်တတ်လာတယ် ။
အလတ် . . . မိသားစုတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်းဖျောက်ပြီး ကွက်ပြီး ဆိုးနေတာလဲ အလတ်တွေ အများဆုံးပဲ ။ မိသားစုတစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်တည်းကျန်ပြီး မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေတတ်တာလဲ အလတ်တွေ အများဆုံးပဲ ။ ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းတွေထက် အဓိက က ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ် ။
အကြီးလောက်လဲ အချစ်မခံခဲ့ရသလို အငယ်လောက်လည်း အလိုလိုက်ခြင်း မခံခဲ့ရတဲ့ အလတ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လွယ်လွယ်လေးရင့်ကျက်လာကြတဲ့ ကလေးတွေပဲ များပါတယ် လောကကြီးကို ကောင်းပြဖို့ ၀န်မလေးသလို အရွဲ့တိုက်ပစ်ဖို့လဲ ၀န်မလေးတတ်ကြဘူး ။ တစ်ဖက်မှာ အရာရာကို သည်းခံပြီး ကိုယ့် ဆန္ဒတွေကို မြိုသိပ်ပစ်ဖို့လဲ ၀န်မလေးတတ်ကြဘူး ။ ဆိုးခြင်း ကောင်းခြင်းတွေ နဲ့ ဒွန်တွဲနေသလို မိသားစုတစ်ခုရဲ့ ကွက်လပ်တွေတိုင်းမှာ အလတ်တွေ ဖြည့်တာပဲ များပါတယ် ။
Categories Knowledge Tags Shin Yoon Post navigation
ဘဝက နတေတျရငျ ကနြေပျစရာပါ …..
ကိုယျ့ကို မှီပွီးရပျနတေဲ့ ဘဝတှအေတှကျ ….ကြှနျမ လဲကလြို့မဖွဈဘူး